सरकारमा बस्ने अनि वैकल्पिक शक्ति भन्ने पक्षमा हामी छैनौं
० नयाँ राजनीतिक संस्कार र भिजनसहितको दल बनाउने भनेर कस्सिएर लाग्नु भएको थियो । अब सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो ?
–सुरुमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा हामीले जे भनेका थियौं अहिले पनि हामी त्यसमा अडिग छौं । बरु, त्यसलाई थप व्यापक बनाउनतिर हामी लागेका छौं ।
० तर, नयाँ शक्ति पार्टी त तपाईंहरूले संघीय समाजवादी फोरमजस्तो दललाई सुम्पिनु भयो नि ?
–हामीले पार्टी गठन गरेको पहिलो दिनदेखि नै भन्दै आएका थियौं कि नयाँ शक्ति तीन तरिकाले बन्छ । पहिलो पुराना राजनीतिक दल आफैं रुपान्तरित भएर । पुराना दल रुपान्तरित नभए पनि ती दलभित्रका व्यक्तिहरू रुपान्तरित भएर । यी दुवै तरिका काम नलागेको खण्डमा पनि बिल्कुल शून्यबाटै भए पनि नयाँ शक्ति बन्न सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । यही प्रक्षेपणअनुरुप ३ वर्षअघि हामीले नयाँ ढंगबाट नयाँ शक्ति पार्टी आरम्भ गरेका थियौं । योबीचमा हामीले पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । अहिले हामीले संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकता टुंग्याएका छौं ।
० विगतमा नयाँ शक्ति बनाउने बेला यी पुराना दलहरूलाई म्याद गुज्रेको औषधि भन्नु भएको थियो । भाका त छिट्टै फेरियो नि ?
–कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट अब परिवर्तन सम्भव छैन भनेर हामीले भनेका हौं तर फोरमलाई हामीले कहिल्यै पनि म्याद गुज्रेको औषधि भनेका छैनौं । फोरमलाई अलि फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ । यसको इतिहास र शैली नहेरी निष्कर्ष निकाल्यौं भने त्यो वस्तुनिष्ठ नहुन सक्छ ।
० फोरम नेकपाको वर्तमान सरकारमा सहभागी छ । विगतमा पनि फोरमले यिनै दलहरूसँग लाभहानीको राजनीति गरेकै हो । फोरम अरु दलभन्दा भिन्न हो भन्दा लोकले पत्याउँछ?
–पुराना दलहरूसँग फोरमको तुलना हुन सक्दैन । उसको इतिहास पनि त्यति लामो छैन । कान्छो दलहरूमध्येको यो पनि एक हो । मधेस आन्दोलनबाट उदय भएको दल हो यो । यसले बोकेको विचार, कार्यदिशा भिन्न छ । र, यसले बोकेको विचार र कार्यदिशाको मूल्यांकनपछि नै हामीले पार्टी एकताको निर्णय गरेका हौं ।
० तर, मान्छेहरू बाबुरामले नयाँ शक्ति बनाउन नसकेपछि फोरममा जबरजस्त लगेर बिलय गरायो भनिरहेका छन् नि ?
–मान्छेहरूले के भन्छन् भन्ने एउटा कुरा हो । हाम्रो डकुमेन्ट्समा के लेखिएको छ र हामीले कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौं भन्ने दोस्रो कुरा हो । त्यसकारण सत्य सत्य नै हुन्छ । हामीले पार्टीको नाममा नै समाजवादी पार्टी, नेपाल भनेर राखेका छौं । अबको गन्तव्य पनि त्यही अनुरुप नै तय हुनेछन् । आगामी दिनमा काम गरेर नै यस्ता आरोपहरूको जवाफ हामी दिनेछौं ।
० समाजवादी पार्टी नेपाल, अब कस्तो पार्टी बन्छ त ?
–तीनवटा पार्टी अहिले विश्वमा अस्तित्वमा छन् । प्रजातन्त्रवादी, साम्यवादी र समाजवादी विचार बोक्ने पार्टी । समाजवादी विचार बोक्ने पार्टीभित्र पनि हाम्रोचाहिँ कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद र पुँजीवादीले भन्ने गरेको समाजवादभन्दा भिन्न समाजवाद हो । त्यो समाजवादको नाम नै हामीले समुन्नत संघीय समाजवाद भनेर दिएका छौं । यहाँनिर सबैलाई उस्तै हुन् भनेर ट्याग लगाउनु वैज्ञानिक तर्क हुन सक्दैन ।
० पुराना दलको कार्यशैली भएन, अब नयाँ संस्कारसहितको राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ भनेर अन्य दलहरू पनि खुलेका छन् । त्यसतर्फ सोझिनु पर्ने एकता पुरानै दलतर्फ मोडियो भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
–मैले अघि नै भनेँ कि हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग छलफल चलाइरहेका छौं । सत्ताधारी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस र राजावादी पुरातनवादी शक्ति राप्रपा मक्किएका दल हुन् । यिनीहरूसँग हाम्रो एकताका लागि कुनै पनि संवाद हुँदैन । यिनीहरू बाहेकका प्रगतिशील शक्तिहरू सबैसँग छलफल गर्छौं भनेका छौं । विगतमा पनि हामीले छलफल गरेका हौं । तर फोरमसँग मात्र हाम्रो कुरा मिल्यो । र, एकताका लागि हामीबीच सहमति जुटेको छ ।
० फोरमबाहेकका अरु दलसँग पनि एकताको सम्भावना छ भन्नु भयो । कुन–कुन दलसँग त्यस्तो सम्भावना छ, बताइदिनुहोस् न ?
–विवेकशील पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, विजय गच्छदारबाट विभाजन भएर गएको भानुराम चौधरीले गठन गरेको दललगायतसँग हामीले छलफल जारी राखेका छौं । फोरमसँगको एकता त हाम्रो सुरुवात मात्रै हो । यो त निकै अगाडि बढ्छ । फैलिन्छ ।
० राजपासँग पनि एकताको प्रयास भइरहेको समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेका छन् । सत्य के हो ?
–हो, राजपासँग पनि एकताको सम्भावना छ । कुरा पनि भएकोथियो । तर, सहमति जुट्न सकेको छैन । आउँदा दिनमा यसबारे थप छलफल गरेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको कामलाई अघि बढाउँछौं ।
० सबै दलहरूसँग एकताको प्रयास गर्दा पार्टी भित्रचाहिँ पर्याप्त छलफल भएन भन्ने सुनिँदै छ, पार्टीमा छलफल गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु भएको हो ?
–होइन, हामीले यसबारेमा पर्याप्त छलफल गरेका छौं । छलफलपछि नै हामी यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौं । पार्टीमा छलफल भएन भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।
० प्रगतिशील शक्तिसँग पार्टी एकता गर्ने भन्नु हुन्छ । अनि व्यावहारमा पुराना षडिएका दलसँग एकता गर्दै हुनुहुन्छ । अलि वैचारिक अलमलजस्तो देखियो नि ?
–हामी कुनै पनि वैचारिक अलमलमा छैनौं, प्रष्ट छौं । अस्पष्ट छैनौं । कुनै पनि दल आफ्ना कमीकमजोरी सुधारेर रुपान्तरणका साथ आउँछ भने त त्यसलाई सकारात्मकरुपमा नै लिनुपर्छ नि होइन र ?
० तपाईंहरूले जेजस्तो तर्क अघि सारे पनि शक्ति राष्ट्रहरूको योजनामा फोरम–नयाँ शक्ति एक ठाउँमा उभिए भनिँदैछ । यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?
–सबैलाई थाहा छ, ३ वर्षदेखि हामी निरन्तर नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटिरहेका छौं । समृद्धि र सुशासन नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । यसका लागि अघि बढ्दा मानिसहरूमा दृष्टिदोष हुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन । आउने दिनमा कामबाट नै हामी त्यस्ता आरोप लगाउनेहरूलाई जवाफ दिन चाहन्छौं ।
० नयाँ शक्ति साँच्चै बन्छ त अब ?
–नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुको अब विकल्प छैन । ढिलो चाँडो यो बन्छ । फोरम–नयाँ शक्ति एकताले यसमा थप आशा जगाएको छ ।
० सत्तारुढ फोरमसँग तपाईंहरू एक हुनु भएको छ । नयाँ एकीकृत पार्टी सरकारमै रहिरहन्छ कि बाहिरिन्छ ?
–नयाँ शक्ति फोरम एकतापछि सरकारमै रहन्छ कि बाहिरिन्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । सरकारमा पनि बस्ने र आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । यसबारे हामी घोषणासभा कार्यक्रमबाटै प्रष्ट पार्नेछौं ।
० सरकारबारे सहमतिचाहिँ जुटिसकेको हो ?
–हो, यो विषयमा पनि हामीबीच सहमति भइसकेको छ । के सहमति भयो भन्ने चाहिँ नसोध्नूस् । २०७६ वैशाख २३ को पार्टी घोषणासभामा नै यसबारे सबै कुराहरू छर्लंग पारिने छ ।
० अब नयाँ बन्ने पार्टीको वैचारिक लाइनबारे कुरा गरौं । यसको विचारचाहिँ कस्तो हुन्छ ?
–हामी समुन्नत संघीय समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न चाहन्छौं । अहिले मुख्यतया पुँजीवादी, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी छन् । हामी पृथक ढंगको समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा पनि समुन्नत संघीय समाजवादी पार्टी बनाउन चाहेका हौं । हाम्रँे पार्टी समावेशी, समानुपातिक हुन्छ । सुशासन र सदाचारको पक्षमा यो दल उभ्भिने छ । तेस्रो यो पार्टी समुन्नत समाजवादमा विश्वास गरेर अघि बढ्ने छ । समग्रमा समतामूलक समृद्धि हुँदै विकासको बाटोमा अघि बढ्ने पार्टी हुनेछ ।
० नेतृत्वको विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ पार्टीको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गर्दै हुनुहुन्छ कि बाबुराम भट्टराईले ?
–हामीले सांगठनिकस्वरुप कस्तो हुने भन्ने टुंगो पनि लगाइसकेका छौं । वैशाख २३ गते पार्टी घोषणासभामा नै यी सबै विषयबारे हामी जानकारी दिनेछौं ।
० दुई तिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारको हालै आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसबारे तपाईंहरूको धारण के छ ?
–राष्ट्रपतिले सार्वजनिक गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम २०७६ वैशाख २१ गते शनिबार सार्वजनिक गर्नु भएको छ । तर यसको सकारात्मक चर्चा भन्दा पनि जताततै नकारात्मक चर्चा मात्रै सुनिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको पदावलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । विकास र समृद्धिका कार्यक्रमहरू त ल्याएको छ, तर हावादारी । हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, शान्तिको जगमा टेकेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने कुरामा यो सरकारको कुनै ध्यान पुगेको देखिँदैन । बरु यो सरकार विस्तारै विस्तारै सर्वसत्तावादी सोचसहित अगाडि बढ्न सकेको देखिन्छ ।
० देशको राजनीतिक कता जान्छ त उसो भए अब ?
–रसियामा जस्तै अभ्यास अहिले नेपालमा भइरहेको छ । हेर्दा लोकतन्त्रमा चाहिने सबै अवयब देखिन्छ । तर, अदृश्य ढंगले त्यस्ता अवयवहरूमा अंकुश लगाइएको छ । कतै यो सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख त छैन भन्ने आशंका पछिल्ला सरकारका गतिविधिहरूले उब्जाएको छ । यसलाई सरकारले सुधार्नुपर्छ । अन्यथा यसले देशलाई सही दिशातर्फ जानबाट रोक्नेछ ।